सि*स्नुको सुप यसरी बन्छ ? – Life Nepali
सि*स्नुको सुप यसरी बन्छ ?
सि*स्नुको व्यवसायिक सम्भावना – नेपालमा सामाजिक उद्यमशीलता फस्टाउदै , एक प्याकेट सि*स्नुको सुपलाई ६० रुपैयाँ पर्छ। नेपाली स्थानीय उत्पादन हो। उत्पादन प्रक्रियामा सबै नेपाली कृषकहरुले काम गर्ने हो। काठमाडौँका ८ / १० वटा ग्रोसरी स्टोरमा उपलब्ध छन्। कबिन मलेकूले अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै काम गरे। मु’टु रो’ग र म’धुमेह सम्बन्धित थुप्रै अनुसन्धानमा पनि संलग्न भए। पढ्दा-पढ्दा कबिनले के बुझे भने – सबै दि’र्घकालिन रो’गहरुको रो’कथाम राम्रो खानपान र स्व’स्थ जीवनशैलीले गर्न सकिन्छ।
आफुलाई रो’ग लागेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। वरिपरी आफ्ना अ’ग्रज, साथीभाईलाई रो’ग लागे पछी भने हामीले पनि आफ्नो श’रीरलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। बेलायतमा चलिरहेको एउटा रि’सर्च अनुसार म’धुमेह जस्ता रो’ग ला’ग्दा औ’षधि खा’नु भ’न्दा प’हिले खा’नपा’न र अ’भ्यास मिलाएर लग्यो भने नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। यो रिसर्चको प्राराम्भिक रि*पोर्ट प्रकाशित भईसक्यो , आउँदो वर्ष फाईनल रि*पोर्ट प्रकाशित हुने क्र’ममा छ। यस्ता का’रणहरु आफुलाई चि’त्त बुझ्दो ला’गेप’छी। .
नेपालमा मेडिफुडको अवधारणा भित्र्याउन मन लग्यो नेपालमा प्रा’कृतिक श्रो’तसाधन असिमित छन्। कबिनलाई म’हसुस भयो कि यी प्राकृतिक श्रो’तसा’धनको अध्ययन गरी केहि गर्न सकिन्छ। कबिन मलेकूको लागी सि’स्नोको सु’प मेडिफुड्सको अवधारणा नेपालमा विस्तार गर्ने एक प्रयास हो सि*स्नो नेपालमा पर्याप्त पाईन्छ मा*नसीक रुपमा पनि नेपालमा सबैले सि*स्नोलाई सजिलै स्वी’कार गर्न सक्छन् त्यसैले कबिनलाई सि’स्नुको सुप उत्पादनमा रुची भयो।
फार्मेस्युटिक्स ‘औषधी’ एउटा छुट्टै डोमेन भएजस्तै मेडिफुड्स पनि छुट्टै डोमेन हो। मे’डिफु’ड्स भनेको औ’षधीको फा’ईदा बोकेको खाद्य वस्तु तर मेडिफुड्स प्रत्येक्ष औ*षधी होइन मेडिफुड्स, अन्य देशहरुमा पनि ; वि’श्वबजारमा धेरै चर्चामा भने आई सकेको छैन। १९९० को दशक देखी सुरुवात भएको मेडिफुड्सको अवधारणालाई जापानले भने गति दिएको छ। मे’डिफु’ड्स भनेकोटोनिक जस्तै हो। नेपाली बजारमा स्तापित हुन सकेको मे’डिफ़ुड भनेको एउटा ‘ग्रीन टी’ हो ग्रीन-टीलाई सबैले स्वी’कार गरी सके व्यवसायिक रुपमा अघि बढेको मे’डिफ़ुड ग्रीन-टी मात्र हो हामी आफ्नै घरमा रोपेको तुलसीको पा’त खाने गर्दछौं अन्य औ*षधीको गु’ण बोकेका खाद्य वस्तु म*सलाको रुपमा त प्रयोग भई रहेका छन् तर व्यवसायिक विस्तार गर्न न’सक्दा स’म्म मेडिफुड्सको क्षेत्र फ’स्टाएको भन्न मिल्दैन।
सि*स्नुको सु’प किन खाने ?
सि*स्नुमा फा’ईबरको मात्रा धेरै हुन्छ। आ’इरनको मात्रा धेरै हुन्छ। मो’टोपनालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउंछ। बच्चालाई दुध खुवाउदै गरेको आमाको दुध बढाउछ। गाउँघर तिर दुध धेरै दिन्छ भनेर भैसीलाई सि*स्नो खुवाईन्छ। मानिसमा पनि त्यस्तै त हो गाउँघर तिर सि*स्नो खुवाएको सुँ*गुरको मा*सु राम्रो रा*तो हुन्छ भन्ने वि*श्वास छ। मानिसमा पनि त्यस्तै हो। हामीले सि’स्नुको फा’इदा यसरी बुझ्न सकिन्छ।
सि*स्नुको सुप कसरी बन्छ ?
सि’स्नुको सुप उत्पादन गर्दै आएका कबिनको अ’नुभवले बताउँछ, “सिस्नु टिप्न गाह्रो हुदैँन। थोरै मात्रामा टिप्न चि’म्टा प्रयोग गर्दा हुन्छ। धेरै मात्रामा टिप्न परे रबरको प’न्जा लगाएर टिप्ने हो. त्यसको लागी कृषकहरुलाई छोटो तालिम दिन्छु। अनि सि*स्नु टिपे पछी सि*स्नु सुकाउन शी’तल ठाउँमा सु’काउने गर्दछौं। सि*स्नुलाई घा’ममा सुकाउने होइन। सि*स्नुलाई स-साना टुक्रामा ग्राइन्ड गर्ने। सि*स्नोमा स्वाद थप्न ‘टेस्ट एनह्यान्सर’को प्रयोग गर्ने साथै सुपलाई बाक्लो, स्वादिलो र अझ पौष्टिक बनाउन जौं, गहुको पिठो, मिल्क पाउडर, भटमास र नुनको प्रयोग भएको छ। सि*स्नुको साईड एफेक्टबारे कुरा गर्दा, कबिन बताउँछन्, “सि*स्नुबाट एल*र्जी हुन सक्छ।
एल*र्जी भनेको कुल ८०० भन्दा धेरै किसीममा हुन्छन्। कुनै पनि खानाबाट हुने ए’ल*र्जी भनेको हजारजना मध्य एक जनालाई हुने हो। त्यसैले कसलाई एल*र्जी हुन्छ भनेर ठ्या*क्क भन्न सकिन्न। सि*स्नु अ*त्याधिक मात्रामा खायो भने शरीरलाई ग*र्मी हुन्छ। हुन त जुन खाद्य वस्तु पनि आवश्यकता भन्दा धेरै खाए बिकार त गरी हाल्छ नि ! सिस्नु खादाँ पनि त्यस्तै कुरा याद राख्नु पर्ने हो। थप, सि*स्नुको सु’पले पि’साब धे’रै ला’ग्छ। दिनको ४ / ५ पटक पि’साब लाग्ने व्यक्तिलाई दिनको आठ पटकसम्म पि’साब लाग्यो भने अ’प्ठेरो म’हसुस होला। तर, पि’साब धे’रै ला’ग्नु राम्रो हो। यसलाई स्वी’कार गरेर, न’आ’त्ति सि’स्नु खाने हो भने फा’ईदा धेरै छन्।
व्यवसायको वर्तमान अ’वस्था
अहिलेको अ’वस्थामा पनि मेडिफुड्सको बिक्रि नेपाली बजारमा गाह्रो छ। सानो परिमाण र थोरै पुजीमा सि*स्नुको सुप बनाउन कबिनले सुरुवात गरेको भएकाले अहिलेको अवस्थामा कबिनले मार्केटिंगमा भन्दा उत्पादनमा बढि ध्यान दिएका छन्। सानो पुजीमा मार्केटिंग र वितरण सहज नहुने भएकाले उनी व्यवसायिक गति लिन हतारीएका छैनन्। एक प्याकेट सि*स्नुको सुपलाई ६० रुपैयाँ पर्छ। नेपाली स्थानीय उत्पादन हो। उत्पादन प्रक्रियामा सबै नेपाली कृषकहरुले काम गर्ने हो। त्यसैले खपद पनि नेपाली बजारमै हुने आशा उनले बोकेका छन्। ८ / १० वटा ग्रोसरी स्टोरमा उपलब्ध छन्।
विशेषगरी अर्ग्यानिक स्टोरहरुबाट यस्ता मेडिफुड्सको बिक्रि भईरहेको छ। सि*स्नुको सुप प्रवर्द्धनका निम्ति फार्मर्स मार्केटमा पनि स्टल लिने प्रयास हुदैछ। ठुल्ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा वितरणको लागी च्यानल मिलाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ। तर अहिलेको परिवेशमा यदि स्व.स्थ्यमा केहि हा.नी भई सकेपछि मात्र हामी नेपालीलाई यस्ता खा.नाको याद आउँछ। हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म ठुलो उपलब्धी भने हुन सक्दैन। मेडिफुड्स स्वा’स्थ्यको छु.ट्टै एक डोमेन भएकाले यो सि’स्नुको सुप औ.षधी बे’च्ने फा’र्मेसीमा किन्न पाईदैन। आगामी भविष्यमा मेडिफुड्स अन्तर्गत नै अन्य खाद्य वस्तुहरु उत्पादन गरे मेडिफुड्सको क्षेत्रलाई नेपालमा विकास गर्न सकिन्छ।
भविष्यको योजना !
कबिनको लक्ष्य भनेको नेपाली स्थानीय क.च्चा प.दार्ध प्रयोग गरी मेडिफुड्स बनाउनु हो। उनले मे.थीको चि.यापति बनाउने प्रयास गरे, अलि प्रविर्धिक हिसाबले अहिले मिलेन। विदेशबाट मेसिन मगाएर काम गर्न उनको इ.च्छा नभएकाले अहिले नेपालमा के गर्न सकिन्छ त्यति नै गर्ने भनेर सि’स्नोको सुपलाई नै कबिनले अघि बढाए। आगामी दिनमा उनलाई ल.प्सीको लेदोसँग पनि काम गर्न मन छ। त्यस्तै नेपालमा थुप्रै यस्ता क’च्चा पदार्थहरु छन् जसलाई सामान्य प्रविधिले प्रशोधन गरी व्यवसायिक हिसाबमा प्रवर्द्धन गरे धेरै फा.ईदा हुनसक्छ। व्यवसायिक रुपमा अघि लैजान सके मात्र नेपालमा पनि स्वा’स्थ्यब।र्दक खाना खाने सं’स्कारको विकास हुन पुग्छ।
Previous आज भगवान सूर्यको विशेष दिन, नगर्नुस् भुलेर पनि यी काम
Next विवाह गर्न जन्ती लिएर बेहुली आफै बेहुलाको घर पुगेपछि…
5 mins ago Life Nepali